Naya Drishti | संस्मरण। टुहुरो बनेको त्यो दिन - Naya Drishti संस्मरण। टुहुरो बनेको त्यो दिन - Naya Drishti
संस्मरण। टुहुरो बनेको त्यो दिन
कूरा २०६५ साल तिरको हो । म पढाउने र पसल गर्ने गर्थे ।मैले पसलमा टेलिफोन सेवा पनि राखेको थिए । त्यतिबेला अहिलेजस्तो हातहातमा मोबाइल थियन । यस्तै दिनको ०२ बजेको हुँदो हो,फोनको घण्टी बज्यो । अन्जान मान्छेले गर्नुभएको रहेछ ।
फोन उठाएर “हेलो” भन्न नपाउँदै मलिन आवाज आयो, “हेलो तपाई कमलाको देबर हो ? हजुर म कमलाको देबर नै हो, किन र हजूर ? एउटा दुःखद् खबर छ ।” मैले हतारिएर सोधेँ, “हजूर , कसलाई के भयो र ?” प्रतिउत्तरले मलाई साह्रै मन खिन्न बनायो । तपाईंकि भाउजू को असामयिक निधन भयो । मेरा हातखुट्टा लगलगाउन थाले ।
फेरि फर्काय ! हेलो हजूर को हूनूहुन्छ र ? प्रतिउत्तर नपाउदै फोन कट्याे टुट् टुट् गर्दै । मेरि भाउजूले दादा २०५५ सालमा सहिद बनिसकेपछी करिब ५ बर्ष पछी दोस्रो बिहे गर्नूभयको थियो । मलाई अपरिचित ब्यक्तिले गरेको फोनको त्यति बिश्वास लागेन र मैले चिनेको सूलिचौरको बहिनिलाई टेलिफोन गर्दै भनेँ, “मैले एउटा अप्रिय खबर सुनेँ, के यो सत्य हो र बहिनि ?” “हो, अन्कल ! तपाईकि भाउजूको शव सूलिचौर हस्पिटलमा छ । म त्यतै जाँदै छु ।” कम्पनसहितको आवाजमा घटनाको पुष्ट्याँइ भयको थियो । म नर्भस भएँ । र भने भोलि सम्म दाहसंस्कार नगर्न भन्नू म र जेठो आउछौ । यति भनेर फोन राखे ।
चैते दसैको दिन थियो । बिहानै घरमा दिदी भाउजूकि छोरी सबैजना सूख दूखका गफ गर्दै हाँसीखुसी दूधको परिकार खिर खाईसकेपछी म पसल तिर लागेको थिए भने अरू घरका परिवारहरू घरायसी काम गर्ने सोच बनाउदै थिय ।
म भने हतारिएर पसल बन्द गरि घरको बाटो तर्फ पाइला लम्क्याउन थाले । बाटोमा माथिल्लो घरे काकी भेटिनु भयाे र सोध्नूभयो किन यति छिटै घर फर्किस ? हतारमा छस त ! के भयो ? क्यै पनि हैन , भनी म सूनेको नसूनेझै गरि आफ्नै गतिमा अगाडि बढिरहे ।
केही छिनमै घर पूगेपछी मेरो रवैया परिवर्तन भएको देखेर मेरि श्रीमती आत्तिईन । यो स्वभाविक पनि थियो । “कसलाई के भयो र ?” किन यति छिटो फर्किनू भयो हँ ? घरमा अरू कोहि पनि थियनन छोराछोरी पर चौरमा खेल्न गयका रहेछन , म केही नबोली आफ्नो कोठा मा छिरी ढोका बन्द गरे ! मसँग उत्तरको अपेक्षा गरी ढोका ढक्ढक्याउन थालिन उनले ।
अकल्पनीय त्यो खबरले मर्माहत मैले दिदी छोरी संगै रमाइरहेकी उनि लाई समेत जानकारी दिन भुलेछु । वास्तवमा म हतारिएको थिएँ । म छिटो सूलिचौर पुग्न चाहन्थेँ । म भाउजूसँग बोल्न चाहन्थेँ । त्यो टेलिफोन संवादसँगै आएको खबर झूट भएको प्रमाणित गर्न चाहन्थेँ । तर सत्यलाई असत्य बनाउने हिम्मत मसँग पो कहाँ थियो र !
मनमा अनेकन् कुराहरु खेल्न थाले । आज, दुनियाँ रङ्गीन छ तर एक परिवार, जो यसअघि पनि अकल्पनीय दु:खको सागरमा डुबेको थियो, उसैमाथि फेरि पनि वज्रपात परेको छ । एउटा घाउमा लगाएको मल्हम सुक्न नपाउँदै फेरि अर्को घाउ बनेको छ । कहिल्यै पुरिन नसक्ने गरी, मुटुमा किला गढे झैं ।
सहनेले पनि कसरी सहन! सक्नु, चोट माथिको त्यो चोट । दैव पनि कति निष्ठुरी हुन सकेको ! ५ वर्षको अन्तरालमा एकै परिवारका दुवै जना श्रीमान श्रीमती नै चुँडी लग्यो है ? कति धेरै रिस हो यी ईस्वरको पनि हाम्रो यो परिवारको खुसीमाथि !
आफ्ना दुवै बाबु आमा ५ वर्षभित्र गुमाउनुको पीडा कसले अनुमान गर्न सक्छ र ? सम्झँदा पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ, भक्कानो फुट्छ अनि मुटुको चाल रोकिन खोज्छ । कठै ती अबोध लालाबाला ! लाउँलाउँ र खाउँखाउँको बेला थियो । हूनत छोडेर गैसकेकी थिईन भाउजूले पहिल्यै । तैपनि आमाजस्तो अर्को अरू को हून सक्ला यो सन्सारमा । कति सरल अनि शालिन थिए यी बालक । के थियो र यिनीहरुको दोष ? कसको के बिगारेका थिए र यति छिट्टै यिनका बा आमा लग्यौ भगवान् ? हामी सबैको यो प्रश्न थियो, ईश्वरलाई ।
उनीहरुले यो परिवार र यि सन्तान प्रती निकै ठूलो सपना सजाएका थिए । अनि त्यही सपना साकार पार्न अहोरात्र मेहनत गर्दै थिए । सुन्दर भविष्यको कल्पनामा रमाउँदै थिए । तर आज ती सबै सपना चक्नाचूर भयका थिय। सबै यादहरु हरक्षण घोच्ने काँडा बनेर मुटुमा बिझ्दै थिए । जेठि छोरिको बिहे भयपछी अब त्यो परिवारमा बाँकी भए केवल २ सन्तति ! तिनै अभागी २ छोराको साथमा छन तिनका दर्दनाक पीडा र हृदयवि’दारक यादहरु !
साह्रै सज्जन थिइन्, ती भाउजू । सरलता र शालीनता सायद तिनकै पेवा हुन् जस्तो लाग्थ्यो । किनकि त्यो उनलाई जति अरु कसैलाई सुहाउँदैनथ्यो । दशकौँदेखि सँगै बसेको म उनको देबर भयर पनि आमाको भन्दा फरक माया पायको थिएन । १ कक्षा समेत नपढेकि उनी म मभन्दा कैयौं ज्ञानि र आत्मबल दृढ भएकि एक सबल नारि थिईन ।
एकातर्फ मेरो मनमा भएको भगवानको आस्था र विश्वास, अर्कोतर्फ आजको यस घटना ! भगवान छन् कि छैनन् ? मेरो मनमा अनेकन् प्रश्नहरुको बाढी आउन थाल्यो । म सानै हुँदादेखि नै आमाले बारम्बार पाप र धर्मको भिन्नता छूट्याई रहनुहुन्थ्यो । सदा धर्मकर्ममा लाग्न प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो । असल बन्न र भलाइका काम गर्न उपदेश दिनुहुन्थ्यो । भलो गरे राम्रो फल हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो । आमाका ती उपदेशजन्य वाणीहरु मेरा कानमा गुञ्जिन थाले । यादहरु तछाडमछाड गरी ओइरिन थाले, वर्षाको भेल झैँ ।
एक हिन्दी गीतको स्मरण भयो, “तूने जो किया होगा, भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा ।” स्कुले जीवनमा पढेको शिशिर र बसन्त को बारेमा लेखिएको पौराणिक कथा सम्झन पुगेँ । कतै यिनिहरूको पनि त्यही गति हूने त हैन ! हामीले मान्दै आएका सबै भगवानका तस्बिरहरु मेरा आँखा अगाडि देखापर्न थाले । ती सबैलाई एकैठाउँमा भेला पारी एक-एक गर्दै सोध्न मन लाग्यो ।
म कठोर हुँदै गएँ । तिनीहरुमाथि घृणा लाग्न थाल्यो । तस्बिर र कहानीमा सुनेका भगवानको अस्तित्व माथि शङ्का लाग्न थाल्यो । ती कहानीहरुमाथिको सत्यता केलाउन मन लाग्यो । अझै भनूँ, भगवानको अस्तित्व खोज्न मन लाग्यो ।
छाती पिटीपिटी चित्का’र र रोदन मिसिएको आवाजमा भगवानलाई यिनको कुनचाहिँ गल्तीको सजाय हो, यो ? भनी सोध्न मन लागिरहेको थियो । म केही गरि सान्त भयपनी ती अबोध बालकलाई यो कूरा सूनाईसकेपछी सम्झाउने बुझाउने हिम्मत ममा थियन । म निःशब्द थिय । आखिर बोल्नलाई के नै पो बाँकी थियो र म संग । हरेक शब्द औचित्यहीन बनेका थिए त्यस क्षण ।
मेरो क्रन्दन र आवेगले घरको कोठानै स्तब्ध थियो । निकै बेरसम्म सम्हालिन नसकेको म जोडले रोय कराय अनि सबै कूरा भनिदिय कि अब हाम्री भाउजू यो सन्सारमा रहनू भयन भनेरव। अब श्रीमती लाई जसरी पनि सम्हाल्नुको विकल्प थिएन ।
निकै बेरको अथक प्रयासपछि आफूलाई र श्रीमतीलाई सम्हाल्ने कोसिस गरे । जसोतसो ०५ बजे तिर म र जेठो बाटो लाग्यौं । जाँदै गर्दा मलाई बिश्वास लागिरहेको थियन । भोलिपल्ट जसरी तसरी सूलिचौर पूगिसकेपछी त्यहाँ घाटमा भाउजूका कान्छा श्रीमान पनि आयका रहेछन , अन्तिम संस्कारमा जाने सबै भक्कानिएका थिए । आँखाको डिलबाट आँसु झार्दै थिए । सपना जस्तो त्यो वास्तविकतामा एकोहोरो भई निकैबेर टोलाएछु ।
भाउजू म’रेको भनेर पत्याउनै गाह्रो मानिरहेका मेरा हात , आखा र मन त्यहि भाउजूको अनुहार हेर्न आतूर थिए । भने छोरो जेठो आफ्नी आमाको अङगालो मा बाधिन पूग्यो । केही छिन पछी दागबत्ती दिन भनी ब्राह्मणले छोरा खोज्दा मेरा हात डराएर कापिरहेका थिए । त्यै पनि मेरो हातको सहायताले जेठाको हातमा अगूल्टो थमायर जबर्जस्ति आगो लगाउन पठाउदै थिय । शवको सदगद गर्नु अनिवार्य थियो । तर कसरी सक्थ्यो र आफ्नो जन्म दिने आमालाई जलायर खरानी बनाउन ? त्यही काखमा हुर्काएको उ प्राणभन्दा प्यारि आफ्नी आमालाई आफ्नै हातले जलाउन कसले पो सक्थ्यो र ! तर म विवश थिए । त्यसलाई आफ्नी आमाको लासमा जबर्जस्ति आगो लगाउन बाध्य बनाय ।
घरीघरी लडिबुडी गर्दै आमाको मृत शरीरलाई अँगालो मार्दै बरबराएको त्यसलाई देखेर म निकै भाबुक बन्न पुगे छू । छाती पिट्दै आफ्नो प्राण पनि यहीँ लिन गरेको अनुरोध र आमासँग चितामा सँगै जल्ने उस्को चाहनाले सबैलाई निःशब्द बनायो। चितामा जल्दै गरेकी उस्कि आमालाई पोल्छ भनी आगो निभाउन खोज्दै थियो । के गर्नू मैले बेस्सरी अंगालेर उसलाई रोके । रोकेपनी आगो निभाउनु मेरिआमालाई जल्न दिने होईन भन्दै करायो । यस्तै भन्दै रोइरहेको त्यो र हामीले हेर्दाहेर्दै केहिबेरमै भाउजू पूरै खरानी बन्नू भयो ।
त्यसपछी हिन्दु संस्कार अनुसार जेठोले कपाल फाल्नू पर्यो , मैले पनि कपाल दारी सब्बै फाले । बा मरिसके पछि कान्छोले बूबा भनेर मलाई बोलाउने गर्थ्यो मेरा दारी आफ्ना कलिला हातले मूसार्थ्यो अब कान्छोले खेलाउने दारी पनि बाकी रहेनन । त्यस दिन त्यही बस्यौ ।
हामीलाई दिइयको खाना खादै गर्दा दाल मा नून लागेको छैन भनी जेठाले नून मागेर खान खोज्यो मैले खान दिईन । सोच्यो होला भोलि घर गयर मीठो नून राखेको दाल खाने छू । घर जादा बाटोमा भोक लाग्यो मलाई चाउचाउ किनिदिनू भन्यो । मैले बिस्कुट क्रिमवाला ल्याईदिय ,जसोतसो घर पूगेपछी त्यसलाई सेतो कपडा लगाउन पठाय काजकिरिया त गर्नु नै थियो ।
मैले बाटो मा आउँदा सोचेको थिय यसअघि धेरैजनाको अन्तिम संस्कारमा सहभागी भइसकेको म । नाता, सम्बन्ध, उमेर, रोग या मृ’त्युका कारण जे भए पनि हरकोहीलाई मानव मरणको पीडा एकै किसिमको हुन्छ भन्ने सोच्दथेँ तर होइन रहेछ । यो भिन्न थियो । अतुलनीय थियो । अत्यन्तै पीडादायक थियो । अरु कसैको पीडा अनि वियोगसँग पटक्कै मेल खाँदैनथ्यो ।
आजसम्म पनि मेरो मानसपटलमा त्यो दु:खद् घटनाको याद ताजै छ । मेरो स्मरणमा घरीघरी आइरहन्छ । त्यस यताका हरेक चैतेदसैमा मेरा भाई बहिनी छोरा छोराछोरी रमाउदा म टोलाउने गर्छु । किनकि मलाई खिरसँगै त्यस दिनको याद आउँछ । एउटा शवसँग दुई मुटु खरानी भएको पलको स्मरण हुन्छ । हो, त्यस दिनदेखि ईश्वर आफैं अभिभावक बिहिन भएझैँ लाग्छ । भगवान स्वयं म’रेझैँ लाग्छ ।
सहिद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउन्डेसन लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्षमा रोल्पाका ओली चयन
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका विप्लवलाई रोल्पा बाट सहिद पुत्रको मार्मिक खुल्ला पत्र
सबैबाट एक्लिएका प्रचण्डलाई रोल्पा बाट सहिद पुत्रको खुला पत्र